प्रचण्ड र बाबुरामले अनाहकमा १७ हजार मानिसको ज्यान लिए, तिनीहरुलाई सजायँ हुनुपर्छ
निशान न्युज फाल्गुन १३, 2075
शुक्रबार साँझ ललितपुरको नख्खुमा रहेको एनसेल कार्यालय अगाडि भएको बम बिस्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् । यो घटनामा कसको संलग्नता छ भनेर प्रहरीले खोजिरहेकै बेला विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले बम विस्फोट जिम्मा लिँदै बटुवाको मृत्यु भएको स्वीकार गरेका छन् । आइतबार बीबीसीले हेमन्तप्रकाश वलीसँग कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ सोही अन्तरवार्ता ।
एउटा बटुवा बाटो हिँडिराख्दा, घर जान लागेको मान्छे, घर पुगेन, ज्यान गुमायो अनाहकमा । यसलाई सानोतिनो घटना भन्न मिल्छ ?
हैन, हामीले त्यस्तो भनेकै छैनौं ।अहिले भर्खर तपाईले सानोतिनो घटना हुन जान्छ भन्नुभयो ।
यस्तो चाहिँ घटनाहरु हुन सक्छन्, हैन ? तर, चाहिँ हामीले यो कुनै निशाना हैन । जुन, बटुवा, जो मानिसचाहिँ त्यहाँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ लाग्न पुग्यो, त्यसप्रति हामीले दुःख प्रकट गरिसकेका छौं ।
यसरी दुःख प्रकट गरेर वा क्षमा याचना गरेर ज्यान फर्काउन सकिन्छ त हेमन्तजी ?
त्यसो त तपाईको चाहिँ सिरियाका लाखौं जनताको त ज्यान र्फकँदैन नि ।
हेमन्तजी, तपाईकै शब्द सापटी लिनुपर्दा कुनै कम्पनीले लुटेको छ भने राज्यका विभिन्न निकायहरु छन्, न्यायपालिका छ । यहाँभित्र दबाव दिने अथवा त्यसरी बम बिस्फोट गराएर अनि त्यो के फर्किन्छ ? त्यसरी तपाईले भनेको उद्देश्य या ध्येय प्राप्त हुन्छ ?
तपाईले के बुझ्नोस् भने न्याय पालिका अथवा सरकारका कुनै पनि निकायले त्यसप्रति ध्यानै दिएनन् । स्वयं न्यायालय नै त्यसबाट प्रभावित हुने...
यहीँनेर रोक्न खोजें हेमन्तजी, त्यसो भए एउटा पार्टी नै राज्य, व्यक्ति नै न्यायपालिका हुन पाउँछ ?
हैन, यो राज्य अन्यायपूर्ण छ भनेर हामीले त्यसका विरुद्ध वैकल्पिक र प्यारालाल राज्यकै घोषणा गरिसकेका छौं ।
सरकारले तपाईहरुले भनेकै शब्लमा यो वैकल्पिक राज्यले अनाहकमा ज्यान लियो नागरिकको, ठाउँठाउँमा विस्फोट गरायो, यसको चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छौं भनेर भनेको छ राज्यले । अब त्यो कारवाहीका लागि तयार हुनुहुन्छ तपाईहरु ?
यसरी सरकारले चाहिँ फेरि न्यायपूर्ण कार्यलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले चाहिँ आउन थाल्यो भने नेपाली जनताले चाहिँ नराम्रोसित प्रतिरोध गर्नेछन् । यसको साथसाथै राज्यसत्ताबाटै लखेटेर नयाँ राज्यसत्ता पूर्णरुपमा स्थापित गर्नेछन् ।
तपाईले कुन नेपाली जनताको कुरा गर्नुभयो ? त्यो विस्फोटको सर्वत्र निन्दा र भत्सर्ना हुँदैछ, ती भत्सर्ना गर्ने नेपाली जनता हैनन् ?
हैन, हामीले त भनिसक्यौं त, हामीले मुख्य काम जे गर्न खोजेका थियौं, त्यसमा चाहिँ केही त्रुटीहरु हुन गए । ती जुन नेपालीले ज्यान गुमाए, त्यसप्रति चाहिँ दुख प्रकट गर्दै उहाँको परिवारको राहतका लागि हामी आफ्नो तर्फबाट कदम अगाडि बढाउने छौं ।
अब अन्त्यमा हेमन्तजी, तपाईहरुले भन्ने गरेको यो क्रान्तिका लागि अझ कति निर्दोष नेपालीले ज्यान दिनुपर्छ ? र, जसको बलिदानीको उपलब्धीमा टेकेर तपाईहरुले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नुहुन्छ ।
हैन, योचाहिँ कुरा हामीले आज प्रचण्ड र बाबुरामहरुलाई पनि सोध्नुपर्छ । बादलहरुलाई पनि सोध्नुपर्छ । किनभने उनीहरुले चाहिँ अनाहकमा १७ हजार मानिसको ज्यान लिएका छन्, तिनीहरुलाई सजायँ हुनुपर्छ । र, हामीचाहिँ यस्ता कमी कमजोरीहरु हुन नदिनका लागि पूर्णरुपले सचेत हुनेछौं ।
तपाईहरुले वार्ताको कुरा पनि गर्नुभएको छ, यो वार्ता चाहिँ सरकारलाई अल्झाउने खेल त होइन नि ।
हामीले वार्ताको कुरा गरेका हैनौं, उनीहरुले गरेको वार्ताको कुराको जवाफ कहिलेकाहिँ दिने गरेका छौं ।
तपाईहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्याको समाधान होस् तपाईहरुका माग सम्वोधन होस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न ?
हैन, हामी समस्याको समाधान होस् भनेर पर्खिराखेका छौं । तर, पनि कुनै समस्याको समाधान हामीले नदेखेपछि अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
ए, त्यो पर्खिँदै गर्दा यता विस्फोट पनि गराइहाल्नुभो, वार्ताबाट निकास निस्कोस् भन्ने त्यतिसम्म कुर्न सक्नुभएन ।
हैन, वार्ता गर्नै चाहँदैन सरकारचाहिँ । वार्ताको कुनै विषयवस्तु नै क्लियर छैन । अब हामीले वार्ता केमा गर्छौं भने १७ हजार मानिसले संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध बन्दूक उठाएर त्यहीँ काँधमा काँध मिलाउन जाने भनेका थिएनन् । त्यस्तै किसिमले हामीले ८० प्रतिशत भूभाग कब्जा गरेका थियौं, त्यो चाहिँ यथावत रहनुपर्दछ । हामीसित ४० हजार जनमुक्ति सेना बनेको थियो, त्यो चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यो किसिमले वार्ता गर्ने भएचाहिँ हामी तयार छौं ।
विगतको नेतृत्वले गल्ती र्गयो भनेर आफैंले भन्नुभयो । र विगतको नेतृत्वले जुन काम र्गयो, जुन बाटोमा हिँड्यो, त्यही बाटो तपाईहरु अपनाउँदै हुनुहुन्छ, तीभन्दा तपाईहरु कसरी फरक हुनुभयो ?
जुन बाटोमा हामी अघि बढिराखेका थियौं, आमूल परिवर्तनको बाटोमा, क्रान्तिको बाटोमा, वर्ग संघर्ष छाडेर वर्ग समन्वयनतिर लाग्यो र प्रतिक्रियावादीहरुसित साँठगाँठ गरेर चाहिँ सत्तामा पुगेको छ ।
कतिपयले त के भन्ने गरेका छन् भने तपाईहरुले केही चन्दा माग्नुहुन्छ, मोटो रकम माग्नुहुन्छ, त्यो रकम नपाएपछि तपाईहरुले बिस्फोट गराउने गर्नुहुन्छ । तपाईहरुको यो कुनचाहिँ वाद हो ?
अब हामीले के बुझौं भन्दाखेरि योचाहिँ भ्रमतिर कोही पनि लाग्न हुँदैन कि हामी कसैबाट मोटो रकम लिनका लागि यस्तोखालको क्रान्तिको जोखिमपूर्ण बाटोमा हिँडिराखेका छौं । योचाहिँ असाध्यै भ्रमपूर्ण कुरा हो ।
हङकङस्थित उच्च अधिकारी चीनद्वारा बर्खास्त, उनको स्थानमा हुइनिङ नियुक्त
बेइजिङ । चीनले हङकङसँगको सम्बन्ध मामिलामा आफ्ना अफिसियल इन्चार्जलाई बर्खास्त गरेको छ । चिनियाँ सञ...
अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न जान आफु योग्य छु कि छैन भनेर जान्नुपर्छ
१५ वर्षदेखि विद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया पठाउँदै आएको इ प्लानेट (एजुकेशन प्लानेट) एजुक...
विदेशी डलरमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाइएको हो
कुनैबेला बामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय थिए फणिराज लोहनी अर्थात् राजु लोहनी । नुवाकोट मदनपुरमा जन्मिएक...
केशव भट्टराई भन्छन्, म प्रचारभन्दा काम गरेर देखाउन चाहन्छु
नेपाली चलचित्रको नियमन र नेपाली भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बनेको चलचित्र बोर्डले ...
श्रीलङ्का आक्रमणको एक सातापछि अनुहार छोप्ने पहिरनमा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । गत साता भएका शृङ्खलाबद्ध आत्मघाती विस्फोटनमा दुई सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएपछ...
‘यति ठूलो विश्वविद्यालयमा एकैपटक कुनै पनि प्रणाली कार्यान्वयनमा आउँछ भन्नु मुर्खता मात्र हो’
केही वर्ष अगाडिदेखि मात्र त्रिभुवन युनिभर्सिटी र यसको मातहतका स्नातकोत्तर तहका सम्पूर्ण कलेज र वि...